यसरि सडकमा गीत गाउथे द भोइस अफ नेपालमा सेलेक्ट भएका तेजेन्द्र गन्धर्भ निकैनै मर्मस्पर्शी भिडियो - VOICE OF NEPAL
यसरि सडकमा गीत गाउथे द भोइस अफ नेपालमा सेलेक्ट भएका तेजेन्द्र गन्धर्भ निकैनै मर्मस्पर्शी भिडियो
२३ भाद्र २०७५, शनिबार ०२:२७ 444 ??? ???????
यस्तै एक व्यक्ति जो आफ्नो प्रतिभा देखाउन द भोइस अफ नेपालको मंचमा आइपुगे । उनलाई असाधारण प्रतिभाकै खानी भन्दा पनि फरक नपर्ला । उनि थिए तेजेन्द्र गन्धर्भ । उनले आफ्नो जाति संस्कृती मात्र नभई नेपाली संस्कृती लाई नै जगेर्ना राख्न ठुलो टेवा पुर्याएका छन् । उनले सारंगी बजाउदै आफैले सिर्जना गरेको गीत प्रस्तुत गर्दा द भोइस अफ नेपालका ४ कोच मध्ये ३ कोचले उनको प्रतिभा मन पराए , उनलाई आफ्नो टोलीमा आउन आग्रह गरेका थिए । उनले भने लोक गीत र संगीतलाई कोच प्रमोद खरेलले न्याय गर्न सक्ने बिश्वास गरेको छु भन्दै कोच प्रमोद लाई नै छनौट गरे ।
जब उनको प्रस्तुति द भोइस अफ नेपालमा प्रसारण भयो उनको प्रस्तुति धेरै भन्दा धेरै दर्शकहरुले रुचाए । उनि यो स्थान सम्म आउन उनले धेरै मेहनत गरेको कुरा त्यस पछि सामाजिक संजालमा बाहिरिएको छ । उनको घर भोजपुर हो , उनले सारंगी बजाउन र बनाउन आफ्नो बुबाबाट सिकेका हुन् । उनि ६ बर्षको हुदा देखि बुबा संग सारंगी बजाउ सिकेका हुन् ।
अहीले सामाजिक संजालमा उनको एउटा भिडियो बाहिरिएको छ जसले उनको संघर्ष एकदम कठिन रहेको देखाउछ । उनि काठमाडौँमा सारंगी बजाएर जीविकोपार्जन गर्ने गरेको देख्न सकिन्छ । उनि एक जना महिला सारंगी बाधक सँग मिलेर सडकमा सरगी बजाई दर्शकहरुलाई मनोरन्जन प्रधान गरिरहेको यो भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा निकै चर्चित भएको छ हेर्नुहोस भिडियो: